Microsoft က Surface ကစာအုပ်ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း - သတင်း Rule
Microsoft က Surface ကစာအုပ်ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း
အဆိုပါ Surface ကစာအုပ်ကိုအကောင်းဆုံး Windows ကိုတစျဦးဖွစျသညျ 10 လက်တော့ပ်. သို့သော်၎င်း၏ပါတီအပိုင်းအစတစ်ခု gimmick ထက်ပို. ခန္ဓာကိုယ်မှ detach လုပ်လိုက်သောအခါမျက်နှာပြင်တစ်လျောက်ပတ်သောအဘို့ကို, ခဏတာလျှင်, စူပါပါးလွှာနှင့်ကိုင်ဖို့လွယ်ကူရဲ့တက်ဘလက်.
laptop ကိုပထမဦးဆုံး, တက်ဘလက်ဒုတိယ, ဒီတက်ဘလက်၏ 7.7mm သို့ညှစ်အပြည့်အဝကို PC အပေါင်းတို့သည်တန်ခိုးနှင့် 2-In-1 စက်ရဲ့အကောင်းဆုံးပေါင်းစပ်ဖြစ်ပါသည်
အမည်ပေးထားသောဤဆောင်းပါး “Microsoft က Surface ကစာအုပ်ပြန်လည်သုံးသပ်: အကောင်းဆုံးကို Windows ရဲ့ Laptop ကို, လိုသလိုဖြုတ်တပ်လို့ရတဲ့မျက်နှာပြင်နှင့်အတူ” ရှမွေလသည် Gibbs ကရေးသားခဲ့, theguardian.com ကြာသပတေးနေ့ 25 ဖေဖေါ်ဝါရီလအပေါ်များအတွက် 2016 07.00 ကမ္ဘာတစ်လွှားကိုသြဒိနိတ်အချိန်
အဆိုပါ Surface ကစာအုပ်တစ်လှည့်ကွက်နှင့်အတူက Microsoft ကနေလက်ပ်တော့၏သစ်တစ်ခုလိုင်း၏ပထမဦးဆုံးဖြစ်ပါတယ်, မျက်နှာပြင်ပယ်လာ.
Microsoft ၏ Surface Pro ကိုလိုင်းရှုပ်ထွေးပယ်စတင်: ကြီးမားသော, ဒီဇိုင်းအတွက်လေးလံသောနှင့်မဟုတ်ဘဲစက်မှုဇုန်. နောက်ဆုံးက Surface Pro ကို4ပိုမိုပါးလွှာပြီးပိုနိုင်စွမ်း, ဒါပေမဲ့တော်တော်အများကြီးအတူတူပင်: Windows ကို 10 ဖြုတ်တပ်လို့ရတဲ့ကီးဘုတ်နှင့်အတူတက်ဘလက်.
သို့သော် Surface ကစာအုပ်လုံးဝကွဲပြားခြားနားသောတိရစ္ဆာန်သည်: တစ်ဦး Laptop ကိုပထမဦးဆုံး, တက်ဘလက်ဒုတိယ. ဒါဟာထူးဆန်းဂုဏ်ထူးကဲ့သို့မြည်, ကီးဘုတ်ကွန်ပျူတာသင်တို့၏မူလတန်းမောင်းသူသည်လျှင်မူကားကအတော်လေးတစ်ဦးခြားနားချက်ကို.
laptop ကိုပထမဦးဆုံး, တက်ဘလက်ဒုတိယ
မျက်နှာပြင်တက်ဘလက်ဖြစ်လာမှလက်တော့အခြေစိုက်စခန်းထံမှ detaches. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
ကီးဘုတ်၏ Speaking, ဒါကြောင့်ပဲစကားမပြောနိုင်သောဆက်စပ်ပစ္စည်းမဟုတ်ပါဘူး. ဒါဟာပိုကြီးဘက်ထရီရရှိထားသူ, တစ်ဦး SD ကဒ် slot ပါ, နှစ်ဦးကို USB 3.0 ဆိပ်ကမ်းများ, တစ်ဦး mini ကို DisplayPort နှင့်သံလိုက်အားသွင်း socket. ဒါပေမယ့်လည်းဒါဟာအတွင်းတစ်ဦး discrete ဂရပ်ဖစ်ကတ်ကိုရှိသည်နိုင်, မော်ဒယ်ပေါ် မူတည်., လိုအပ်သည့်အခါက Surface စာအုပ်အများကြီးပိုဝက်အော်ပေးခြင်း.
ကွန်ပျူတာ၏ပြုပြင်ခြင်းအမှုအရာကြွင်းလေသမျှကို screen တွင်ထည့်သွင်းထားပါသည်, သောက ပို. ပင်ထူးခြားပြောင်မြောက်ကယ့်ကိုဘယ်လိုပိန်စေသည်.
အဆိုပါ screen နဲ့ကီးဘုတ်ထွက်မိတ်ဆက်အစားပဲ pivoting တဲ့ဖန်စီ Fulcrum ပတ္တာအားဖြင့်ချိတ်ဆက်ထား. ဒါဟာပိုကောင်းတဲ့မျက်နှာပြင်ဟန်ချက်မျှအောင်ပြုလုပ်ပေးဖို့ကီးဘုတ်၏အခြေစိုက်စခန်း၏အရှည်ချဲ့ထွင်, အလေးချိန်ပေါင်းထည့်ရန်မလိုဘဲ.
ဒါဟာလိုက်တယ်ကြည့်, လုနီးပါးအေးမြ, နှင့်အလေ့အကျင့်အတွက်ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်တယ်. ဒါဟာနောက်ကျောအချို့သောအခြားလက်တော့ပ်အဖြစ်အတော်လေးအဖြစ်ဝေးစောင်းမပါဘူး, ဒါပေမဲ့ဝေးလုံလောက်တဲ့တစ်စားပွဲခုံမှာအဆင်ပြေကြည့်ရှုဘို့.
အဆိုပါကီးဘုတ်နှင့်မျက်နှာပြင်မီးခိုးရောင်မဂ္ဂနီဆီယမ်အလွိုင်းမှလုပ်နေကြတယ်, ကြည့်နှင့်ကောင်းတဲ့ခံစားသော, ဒါပေမဲ့အမှတ်အလွယ်တကူ. အ Surface ကစာအုပ်နဲ့ငါ့တိုတောင်းသောအချိန်၌ငါဂရုတစိုက်ကြောင့်ပြီးနောက်ရှာဖွေနေပေမယ့်ကီးဘုတ်ရဲ့နားလည်နှင့်နှုတ်ခမ်းအပေါ်တစ်ဦးအမှတ်အသားပေါ်မှာခြစ်သတိထားမိတယ်.
တဲ့အခါမှာပိတျ, အပတ္တာပြားချပ်ချပ်ခေါက်ပါဘူး, အစားက 13mm အထူတစ်ဦးပွိုင့်ဖို့ 22.8mm ကနေ tapers တစ်သပ်ပုံသဏ္ဌာန်ဖန်တီးခြင်းတစ်ဦးလက်ချောင်းရဲ့ width ကိုအကြောင်းကွာဟမှုရှိပါတယ်.
တစ်နေရာလေးကိုတင်ဆက်မှုမျက်နှာပြင်များအတွက်ဒါမှမဟုတ်လေယာဉ်ပေါ်ဗီဒီယိုကိုကြည့်ဘို့ပြောင်းပြန်အတွက် tablet ကိုပူးတွဲ. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
Screen ကို: 13.5LCD ကိုအတွက် 3000 x က 2000 (267 ppi)
processor: Intel ရဲ့ Core i5 သို့မဟုတ် i7 (6ကြိမ်မြောက်မျိုးဆက်)
သိုလှောင်ခြင်း: 128, 256 သို့မဟုတ် 512GB
ကွန်ပျူတာစက်လည်ပတ်ရေးစနစ်ပရိုဂရမ်: Windows ကို 10
ကင်မရာကို: 8အမတ်နောက်ဘက်, 5အမတ်ရှေ့-face
connectivity ကို: ဝိုင်ဖိုင်, ဘလူးတုသ်, ယူအက်​​စ်ဘီ 3.0, SD က, mini ကို DisplayPort
laptop ကိုရှုထောင့်: 232.1 x က 312.3 x က 22.8mm
laptop အလေးချိန်: 1.52 သို့မဟုတ် 1.58Kg
tablet ကိုရှုထောင့်: 220.2 x က 312.3 x က 7.7mm
tablet ကိုအလေးချိန်: 726ဂရမ်
laptop ကိုအခြေမှနောက်ပြန်မျက်နှာပြင်ချိတ်ဆက်ခြင်းကကီးဘုတ်ပေါ်မှာလှဲချပြန်ခေါက်ခံရဖို့ခွင့်ပြု, တံနှင့်အတူပိုမိုလွယ်ကူအရေးအသားတစ်ခုထောင့်မှာကျင်းပ. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
သငျသညျမြျှောလငျ့စခွေငျးငှါအဖြစ်, တစ်ဦး Microsoft ကလုပ်စက်ဖြစ်ခြင်း, အ Surface ကစာအုပ်က Windows ပြေး 10, ငြင်းခုံဖွယ်နေ့စွဲဖို့အကောင်းဆုံး Windows ဗားရှင်းသောဖြစ်ပါသည်.
အဆိုပါဆော့ဖ်ဝဲကိုတကယ်မဆိုအခြား Windows ပေါ်မှာမရရှိနိုင်သော Surface ကစာအုပ်အဘို့မဆိုအထူးသဖြင့်အပြောင်းအလဲသို့မဟုတ် customisible ရှိသည်ပါဘူး 10 ပြောင်း.
အဆိုပါ operating system ကိုသန့်စင်ပြီးနှင့်တန်းတူအချိုးအစားအတွက်တစ်ဦးရှုပ်ထွေးနှစ်ဦးစလုံးသည်. ဒါကြောင့်ကိုဖော်ပြရန်ဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုခေတ်သစ်ဖြစ်ပါသည်, အလားတူအသက် Windows ကိုကျော်တိုက်ရိုက် layered ပြင်ဆင် user interface ကို.
ပတ်ပတ်လည်ကိုရယူခြင်း, အစီအစဉ်များနှင့်နေ့စဉ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစတင်ဒီအပေါ်ဆုံးအလွှာအတွက်လုပ်ကိုင်ခြင်းနှင့်အမှန်တကယ်အတော်လေးသုံးစွဲဖို့လွယ်ကူပြီးအသုံးဝင်သည်. သင်တို့မူကားလေးနက်သောအရာတစ်ခုခုပြောင်းလဲဖို့လိုအပ်သည့်အခါ, ဥပမာအားဖြင့်တစ်ဦးက desktop program ကို uninstall, သငျသညျကျောငါက Windows ကနေသတိရတူညီ Control Panel ကိုသို့ကို boot ရ 2000 – ဒါကြောင့်အနိုင်နိုင်ပြောင်းလဲသွားပြီ.
ဒါဟာအင်အားကြီးင်, ဟုတ်ပါတယ်, သင်ပြုဘူးလိုရနိုင်, ဒါပေမယ့်တကယ်တန်းက Windows သောအရာကိုအကြားခြားနားချက် 10 အလွှာနှင့် underworkings အတော်လေးအနှောက်အယှက်ဖြစ်စရာကြီးဖြစ်ပါတယ်. အ uninitiated အဘို့ငါကအတော်လေးပျက်စေဖြစ်နိုင်ပါတယ်သံသယ, သင်အချိန်မှာသင့်ရဲ့လက်ချောင်းသုံးပြီးနှင့်ရုတ်တရက်အလွန်သေးငယ်သော boxes တွေကိုအပေါ်ကိုအသာပုတ်ရန်ရှိသည်ပါတယ်အထူးသဖြင့်လျှင်.
Windows ကိုပိုမိုများအတွက် 10 ဖတ်:
Windows ကို 10 ပြန်လည်သုံးသပ် - Windows ရဲ့နောက်ဆုံး version ကိုအစဉ်အဆက် Microsoft ရဲ့အကောင်းဆုံးဖြစ်စေခြင်းငှါ,
အဆိုပါ Surface ကစာအုပ်အဘို့သတိပြုပါရန်အရာစုံတွဲရှိပါတယ်. ပထမဦးဆုံးက Windows မင်္ဂလာပါဖြစ်ပါသည်, အရာစကားဝှက်တွေမရှိဘဲသင်၏မျက်နှာနှင့်မှတ်တမ်းများသင်၌အသိအမှတ်ပြု, စိတ်ကူးသည်နှင့်အမျှလျင်မြန်စွာကွန်ပျူတာ boot နိုင်ပါတယ်အဖြစ်အလုပ်လုပ်တယ်.
အမှုအရာကိုအသာပုတ်တစ်ခုသို့မဟုတ်တက်ဘလက်အဖြစ်က Surface စာအုပ်သုံးစွဲဖို့ကြိုးစားနေသည့်အခါအမှန်တကယ်တက်ဘလက် mode ကိုဖွင်ကူညီပေးသည်.
အဆိုပါ Surface ကစာအုပ်အဆင်းလှသောရှိပါတယ်, မြင့်မားတဲ့ resolution နဲ့အကြီးအကြည့်ထောင့်ရှိပြီးတောက်ပကြည့်ကြောင်း Pixel သိပ်သည်းမျက်နှာပြင်, သငျသညျစနစ်တကျစကေးမနိုင်ထားတဲ့ app ကိုရောက်ရှိသည်အထိ. ထိုကိစ္စတွင်၌သင်တို့ကိုမှုန်ဝါး icon များနှင့်စာသားမှာရှာနေတက်အဆုံးသတ် – တစ်ကယ့်ကိုဆိုးရွားအတွေ့အကြုံကို, ထိုကဲ့သို့သော Evernote အဖြစ် Desktop ပေါ်မှာ Windows ကိုအစီအစဉ်များကိုငါ၏အသုံးပြုမှုအားလုံးကိုအရမ်းဘုံခဲ့သည့်, အမျိုးမျိုးသောစာသားကိုအယ်ဒီတာများနှင့်အခြားအစီအစဉ်များ.
Windows အတိုးကနေ Apps ကပတူပြဿနာကနေဆငျးရဲခံရပါဘူး, ဒါပေမဲ့သူတို့ကမကြာခဏအဖြစ်အစွမ်းထက်မဟုတ်ပါဘူး. Evernote Touch ကိုနမူနာကောင်းတစ်ခု, ဒါပေမယ့်တကမှုန်ဝါးရှုပ်ထွေးမှာစေ့စေ့ကြည့်ရှုဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ထက်ပိုကောင်းမယ့်.
အဆိုပါ Surface ကစာအုပ်ရဲ့ကီးဘုတ်နဲ့ trackpad အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့များမှာ. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
ပထမဦးစွာနဲ့ဗွေဆော်, အဆိုပါ Surface ကစာအုပ်အစဉ်အမြဲငါကိုအသုံးပြုထားသောအကောင်းဆုံးကို Windows လက်တော့ဖြစ်ပါသည်. ကာလ. ဒါဟာအစာရှောင်င်, အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ backlit ကီးဘုတ်ရှိပါတယ်, တကယ်ကြီးမြတ် trackpad, အလုံအလောက်ဆိပ်ကမ်းများနှင့်ကပဲ 1.5kg ကျော်မှာအတော်လေးအလင်းရဲ့.
အချို့က Windows Laptop တွေကိုပါးလွှာများမှာ, အချို့သောပေါ့ပါးများမှာ, သော်လည်းအဘယ်သူမျှမျက်နှာပြင်၏အတော်လေးအဖြစ်ကောင်းသောပေါင်းစပ်ပြီ, ကီးဘုတ်, အာဏာနှင့်စက်မှုဒီဇိုင်း.
ဒါဟာသတိပြုရကျိုးနပ်မယ့်, အဆိုပါ Surface ကစာအုပ်မှထူးခြားသောမဟုတ်ပေမယ့်, input ကိုများအတွက်မျက်နှာပြင်ကိုထိနိုင်ဖြစ်ခြင်းအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ကြောင်း, စာရိုက်နဲ့တူပျင်းစရာကောင်းသောအရာတို့ကိုကျင့်ကိုကျင့်လျှင်ပင်, ပတ်လည် cursor ရွှေ့ဤမျှလောက်ပိုမြန်တဲ့ trackpad သုံးပြီးထက်ဖြစ်သကဲ့သို့.
တက်ဘလက်တဦးတည်းလက်နှင့်ရေတိုကာလအဘို့အကိုင်ဖို့လုံလောက်တဲ့အလင်းဖြစ်၏, ဒါပေမဲ့အတော်လေးကြီးမားသည်. သင်က Surface ကစာအုပ်ပဲတက်ဘလက်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုနှင့်အတူနေအိမ်စွန့်ခွာဖို့မဖြစ်နိုင်နေ. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
တက်ဘလက်ယန္တရားသော့ခတ်အလွန်ဖန်စီ "မှတ်ဉာဏ်ဝါယာကြိုး" ကကီးဘုတ်ပေါ်ကိုကျင်းပ, သောကလက်ရှိကဖြတ်ပြီးလျှောက်ထားသောအခါပုံသဏ္ဍာန်ပြောင်းလဲ. အဆိုပါယန္တရားအီလက်ထရောနစ်ဖြစ်ပါသည်: မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိကီးဘုတ်ကိုသို့မဟုတ် icon တစ်ခုပေါ်မှာ button ကိုနှိပ်တက်ဘလက် disengages.
နှိမ့်ချကီးဘုတ်ကိုင်ပြီးနေချိန်မှာသင်ကတိုက်ရိုက်ဖွင့်နှစ်ဖက်စလုံးကနေဆွဲထုတ်ရန်ရှိသည်. ဒါဟာခက်ခဲအသံ, ဒါပေမဲ့မဖြစ်. ကချိတ်ဆက်ခြင်းဟာ connectors ကျော်မျက်နှာပြင် plonking ့ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်. အလိုအလျှောက်ပြီးတော့နှစ်ခုချုပ်ကိုင်တစ်ဦးချင်းစီကတခြား.
မျက်နှာပြင်ကီးဘုတ်အခြေစိုက်စခန်းအပေါ်လမ်းတဝိုက်ဖြစ်စေထားရှိနိုင်ပါသည်, လက်ပ်တော့များကဲ့သို့အဓိပ္ပာယ်သို့မဟုတ် inverted, ဒါကြောင့်တစ်ဦးစားပွဲခုံပေါ်မှာကြီးပြင်း notepad ကဲ့သို့ဆင်းခေါက်တစ်ခုသို့မဟုတ် display ကိုအဖြစ်ထနိုင်ပါတယ်.
အဆိုပါ Surface ကစာအုပ်ပါဝါရှိပါတယ်နေစဉ်တက်ဘလက်သာ detach လုပ်လိုက်သောနိုင်ပါသေးတယ်တန်ဖိုးရှိဒါဟာင်, ထိုတရားသည်သင့်လက်ထဲမှာကွယ်လွန်လျှင်အဘယ်သူမျှမရှိပါက reattaching ဒါမှမဟုတ်ကျော်လှန်နဲ့စနစ်တကျပြုလုပ်ပိတ်ဖို့ရန်က detaching ရဲ့အဓိပ်ပာယျ.
မျက်နှာပြင်ကအရမ်းချွန်ထက်ဖြစ်ပါသည်, တစ်ဦးက iPad သို့မဟုတ် Google Pixel ကို C နဲ့တန်းတူအပေါ်, ယင်း၏စဉ် 3:2 အချိုးကစက္ကူတစ်ဦးက A4 နည်းနည်း၏အရွယ်အစားနှင့် ပတ်သက်. ရဲ့အဓိပ်ပာယျ. Website များ, ရုပ်ပြစာအုပ်အားလုံးအကြီးကြည့်ရှု. ဒါဟာဗီဒီယိုကိုကြည့်ဘို့ကျယ်သောအသံနှင့်ရှင်းလင်းသောဖြစ်ကြောင်းနှစ်ခု front-facing speakers ရှိပါတယ်, ယင်းနားကြပ်ဆိပ်ကမ်းကိုတက်ဘလက်အတွက်နေစဉ်, မကီးဘုတ်.
အဆိုပါ 13.5in မျက်နှာပြင်အများဆုံးကိုအခြား tablet များထက်၎င်း၏သိသိသာသာပိုကြီးကိုဆိုလိုသည်နှင့် 726g မှာလည်းတော်တော်မိုးသည်းထန်စွာင်. full-သွေးကို PC ဖြစ်ခြင်းနေသော်လည်းနေဆဲသာ 7.7mm အထူင်, တကယ်အတော်လေးအထင်ကြီးရာဖြစ်ပါသည်. ဒါကအများဆုံးစမတ်ဖုန်းထက်ပိုမိုပါးလွှာမယ့်.
ငါလျောက်ပတ်သောအရောင်အဝါနှင့်အတူတက်ဘလက်ထဲကဖတ်နေအသက်တာ၏ပတ်ပတ်လည်သုံးနာရီရရှိရန်စီမံခန့်ခွဲ. Microsoft ကဗီဒီယိုပြန်လည်ပြသခြင်းလေးနာရီဆန့်ကြလိမ့်မည်စာရငျးယူ. တက်ဘလက်ကိုလည်းကီးဘုတ်ကနေသီးခြားစီတရားစွဲဆိုနိုင်ပါတယ်, သငျသညျဖို့လိုအပျသငျ့သညျ.
တက်ဘလက်အဖြစ်ကို PC ၏အကြီးမားဆုံးအားနည်းချက်အများဆုံးကိုအခြား tablet များ၏လက်ငင်း-အပေါ်သဘောသဘာဝ Windows အတွက်လက်ငင်းအဖြစ်အတော်လေးမဟုတ်ဖြစ်ပါတယ်. ဒါကြောင့်ပဲအိပ်ပျော်ပိတ်ပစ်ခြင်းနှင့်မပါလျှင်၎င်းသည်စက္ကန့်အနည်းငယ်ရှိနိုင်ပါသည်, အစုတခုကာလအတွင်းအပြီးအရာမ.
အဆိုပါ Surface ကကလောင်ဟာ 12.5in screen ပေါ်မှာစိတ်ကူးများထွက်ဝိုငျးဝနျးရန်လွယ်ကူစေသည်. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
Microsoft ရဲ့တံစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်အကောင်းဆုံးများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်, အကောင်းတစ်ဦးအလေးချိန်နှင့်အရွယ်အစားနှင့်အတူ. ဒါဟာသံလိုက်မျက်နှာပြင်၏ဘေးထွက်ပူးတွဲ, ကျွန်မပတ်ပတ်လည်ရွေ့လျားသောအခါဝတ်တည်းခိုသည့်, ဒါပေမယ့်အိတ်၌ချွတ်ခေါက်တယ်.
ဒါဟာရှိပါတယ် 1,024 တကယ်ဖိအား sensitivity ကို၏အဆင့်ဆင့်နှင့်စက္ကူပေါ်မှာဘောပင်များကဲ့သို့ခံစားမိပါဘူး. သင်တစ်ဦးခက်သို့မဟုတ်ပျော့ပြောင်းပြီးခံစားပိုနှစ်သက်လျှင် NIB လည်းပြောင်းလဲသွားနိုင်ပါတယ်.
နှစ်ခုခလုတ်ရှိပါတယ်. ကိုထိပုတ်ပါသို့မဟုတ်ပုံဆွဲလုပ်ရပ်တွေများအတွက်အထူးပြုသော့ချက်ကဲ့သို့ဘေးထွက်လုပ်ရပ်များအပေါ်တစ်ခုမှာ. ထိပ် button ကိုတစ်ခဲဖျက်နဲ့တူပြုမူခြင်းနှင့်အမျိုးမျိုးသောအစီအစဉ်များကိုစတင်ရန်သို့မဟုတ်တဲ့အခါမှာတစ်ခုတည်းလုပ်ရပ်များလုပ်ဆောင် configured နိုင်ပါသည်, သို့မဟုတ်နှစ်ဆစာနယ်ဇင်းတစ်ခုသို့မဟုတ်စာနယ်ဇင်းနှင့်ကိုင်. ပုံမှန်အားဖြင့်ပြုလုပ်သည့်သတင်းစာအပေါ် OneNote လွှတ်တင်, သငျသညျဒုတိယသို့မဟုတ်ဒါအတွက် screen ပေါ်မှာဆွဲရန်ခွင့်ပြုတော်မူသော.
အဆိုပါ Microsoft က Surface ကစာအုပ်သိုလှောင်မှု 128GB နှင့်အတူအခြေခံမော်ဒယ်£ 1,299 မှာစတင်သည်, RAM ကိုတစ် Core i5 နဲ့ 8GB, ဒါပေမယ့်ကီးဘုတ်အတွက် discrete ဂရပ်ဖစ်ကဒ်မပါဘဲ.
သိုလှောင်မှု 256GB နှင့်အတူ i5 မှဗားရှင်းက£ 1,599 ကုန်ကျတဲ့ discrete GPU ကို. 256GB နှင့်အတူ Core i7 ဗားရှင်း, 8RAM ကို GB ကိုနှင့် discrete GPU ကို 2,249 ££ 1,799 ကုန်ကျနှင့် RAM ကိုသိုလှောင်မှုနဲ့ 16GB ၏ 512GB နှင့်အတူ.
နှိုင်းယှဉ်, Apple ရဲ့ 13in MacBook Pro နှင့် (ကိုယ့်လက်ပ်တော့ပ်) £ 900 မှာစတင်, Dell ရဲ့ XPS 12 2-In-1 £ 899 မှာစတင်နှင့် Asus ကရဲ့ပြောင်း T300CHI £ 800.
အဆိုပါမီးခိုးရောင်မဂ္ဂနီဆီယမ်ကိုယ်ထည်ကြည့်ခြင်းနှင့်ပရီမီယံခံစားရ, နောက်ကျောအပေါ် Microsoft ရဲ့တောက်ပ Windows ကိုလိုဂိုနှင့်အတူ. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
ဒါဟာတိုးတက်မှုအတွက်အလုပ်င်: ငါစက်နှင့်အတူပြဿနာများနှင့်ထူးဆန်းတဲ့အပြုအမူ fixed ပြီနောက်ဆုံးသတင်းများ၏စုံတွဲတစ်တွဲခဲ့ပြီးပြီ
ရံဖန်ရံခါက screen ကိုချိတ်ဆက်မှုကိုဖြတ်တောက်နှင့်ချိတ်ဆက်သည်အထိကီးဘုတ်မှတဆင့်ကောက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးလို့
တခါတရံတက်ဘလက် mode ကိုဝင်မည်မဟုတ်, တစ်ဦးစတင်မှုလိုအပ်
တက်ဘလက်များကဲ့သို့သုံးပြီးလျှင် power-saving mode ကိုမရှိမဖြစ်လိုအပ်
ဒါဟာပထမဦးဆုံးလက်ပ်တော့များတွင်ဘက်ထရီပိုကိုအသုံးပြုသည်, ဒါကြောင့်တက်ဘလက်အချို့သောဖျော်ရည်၎င်းကို detach မှထွက်ခွာခဲ့ပါသည် (သင်သည်လည်းသီးခြားစီတက်ဘလက်ကိုအားသွင်းနိုင်ပါတယ်)
တစ်ဦးက dock ကိုတစ်ဦး Pseudo-desktop ပေါ်မှာသို့လှည့်မှရရှိနိုင်, Ethernet နှင့်အတူ, ယူအက်​​စ်ဘီ, နားကြပ်နဲ့မျိုးစုံ Mini DisplayPort. သို့သော်, အဆိုပါသင်္ဘောကျင်းသို့ပလပ်အခါက Surface စာအုပ်သို့တိုက်ရိုက်ပလပ်သည့်အခါဒဏ်ငွေအလုပ်လုပ်ခဲ့တဲ့မော်နီတာအလုပ်လုပ်မှာမဟုတ်ဘူး.
မျက်နှာပြင်သည်ကြီး, အဆိုပါပတ္တာအလွန်ကောင်းစွာစိတ်ဝင်စားဖို့နှင့်အကျင့်ကိုကျင့် detaching နှင့်ပြန်လည်ပူးတွဲများအတွက်ယန္တရားဖြစ်ပါသည်.
အဆိုပါ Surface ကစာအုပ်ပွဲတစ်ပွဲတစ်ဦး Laptop နဲ့တက်ဘလက်များအကြားသေးအကောင်းဆုံးစေ့စပ်ညှိနှိုင်းဖြစ်ပါသည်, သင့်ရဲ့အဓိကအသုံးပြုမှုလက်ပ်တော့ကဲ့သို့ဖြစ်ရမယ့်လျှင်. သင့်ရဲ့ရင်ခွင်တစ်ခုသို့မဟုတ်စားပွဲခုံထက်အခြားဘာမှပေါ်တွင်အသုံးပြုခံရသည့်အခါဒါဟာက Surface Pro ကို၏ပြဿနာများကိုဖြေရှင်းနိုင်ပါတယ်.
ဒါပေမဲ့, တက်ဘလက်အဖြစ်, အော့ဖ်လိုင်းမီဒီယာစားသုံးမှုများအတွက် iOS ကိုသို့မဟုတ် Android အတွက်ရရှိနိုင်ပါသို့မဟုတ်အလားတူအဆိုပါ app များကိုပျောက်ဆုံးနေ, မိုဘိုင်းဂိမ်းဖြစ်သကဲ့သို့. ဒါဟာအစကအရမ်းစျေးကြီးရဲ့ - ဒါပေမယ့်ငွေသင်တစ်ဦးအစွမ်းထက်စက်ရ, အကောင်းဆုံးတံနှင့်တစ်ဦးအလုပ်-အဆင်သင့်ဘက်ထရီနှင့်အတူ.
အကောင်းအဆိုး: အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ကီးဘုတ်, လျောက်ပတ်သော trackpad, တောက်ပသောမျက်နှာပြင်, အကြီးအတံ, 13-နာရီဘက်ထရီ, ဖန်စီပတ္တာ, အကြီး 2-in-1 အပေးအယူ, သငျ့လျြောသောဆိပ်ကမ်းများ, Windows ကိုမင်္ဂလာပါ
Cons: Windows ကိုတက်ဘလက် app ကိုကွာဟမှုရှိပါတယ်, ဆော့ဖျဝဲ bug တွေ, စျေးကြီး, တက်ဘလက်သာဘက်ထရီကြာကြာဖြစ်နိုင်, တက်ဘလက်များအတွက်မိုးသည်းထန်စွာ, HiDPI mode ကို desktop ပေါ်က apps များအဘို့ပျက်ကွက်, သငျသညျအလုံအလောက်နက်ရှိုင်းတူးလျှင်အင်တာဖေ့စတဲ့ရှုပ်ထွေးဖြစ်ပါသည်
Microsoft က Surface Pro3ပြန်လည်သုံးသပ်မှု: သေးအများဆုံး lappable တက်ဘလက်
Google က Pixel ကို C ပြန်လည်သုံးသပ်: အကောင်းဆုံးကိုအန်းဒရွိုက်တက်ဘလက်အလားအလာအိုင်ပက်ပြိုင်ဘက်ဖြစ်ပါသည်
Google က Chromebook Pixel ပြန်လည်သုံးသပ်: လှသောအဆင်း, အစွမ်းထက် - သို့သော်ရုံ Chrome ကို
အပိုဒ်, computing, ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ, laptop များ, Microsoft က, Microsoft က Surface က, ပြန်လည်ဆန်းစစ်ချက်များ, ရှမွေလသည် Gibbs, တက်ဘလက်ကွန်ပျူတာများ, နည်းပညာ, Windows ကို, Windows ကို 10
← အဆိုပါအများစုမှာလတ်တလောရူးသွပ်နည်းပညာနှင့်တီထွင် [VIDEO] ဒီအလုပျ၏အနာဂတ်ဖြစ်ပါတယ်? →